トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Table kusarudza panguva nepachinko parlors chiitiko
Nepachinko yokumusoro shure panguva chacho chinenge tinotova nomufananidzo chenyaya hombe, asi hapana chinhu chakadaro. Nguva dzose kupora tafura kunyange panguva chacho aripo. Chokwadi, sezvo rakaitirwa pakubuda, asi kuti kuva kana kuchikuva kusarudza kana nyore akaenzanisa nguva dzose ichokwadi, kuti kuderedza kupfuurira mubhizimisi, achasuma rakasanangurwa pachikuva nguva chiitiko yakaitwa.
Chokutanga, ndinoda pfungwa panguva chiitiko chiratidzo muenzaniso mumwe chitoro. For
billboard womuenzaniso zvitoro, nekuti vakawanda uchida kupa muenzaniso wako, zvakakwana kuti chiitiko chikuru, unofanira kuisa simba pamusoro billboard yokutevedzera ari nepachinko yokumusoro. The chete chiratidzo womuenzaniso, ndizvo anouya kuvandudza Horukon yakatarwa uye chipikiri kuchinja pane nguva dzose dzose. Muenzaniso kusarudzwa panguva chacho, yeuka mutambo iri billboard yokutevedzera.
Mukupesana, regai kuisa simba rakawandisa, akawira kudzokera apore muenzaniso nenguva vanonzi chiitiko ndiye Xintai.
muna Xintai, kunyange pasina kuzarura zvishoma zvipikiri, saka isu agere vatengi pasina kuwedzera Horukon ezvinhu, Xintai ndiye kakawanda muna kupora womuenzaniso zvisizvo. Tichifunga
■ pano kukosha
nepachinko yokumusoro vemabhizimisi gwara, kuwedzera nhamba vatengi iri kuita achibudisa payout, akaita kuti zvakanaka vatengi, payout panzvimbo vanhu vanounganidza pasina kuita chinhu haufaniri kuti ape. Izvi zvingava zvakanaka kuyeuka nokuti inokosha pangoro. Kamwe iwe akatara
raparadza yokutevedzera, akavapindurawo, asi ari data, pano edza kutarisa kugumbuka patafura zuva pamberi. The zuva simba chawo pamberi, pane mukana kuti Horukon yakatarwa uye chipikiri kugadziridzwa haasati achinja hwandaiva chipikiri. Zvisinei, pane zvakaitika atadze kushanda zvakanaka mufurati, nokumutsa Horukon ezvinhu, zvingangoita kuti uvhure chipikiri.
munguva chiitiko, nekuti pane zuva uchida nyaya yacho payout, asi tiri gonna akatambanudza Chokwadi, achava simba kumira zvakare kudza yacho dhefisiti uye aizomutsa Horukon wakaiswa kuti simba, kunyange sezvazvakaita. Kuti izvi zvidaro, Strong chemwenje, uchakurati- zvirokwazvo yakawanda kumupfuura senguva dzose.
Ukuwo, munyika kugumbuka tafura sezvo zviri mbambo, zvakamubaya achava simba uye kwete kubva wekushanduka chete senguva dzose. Uyezve, zvichireva kuti uyewo chiitiko sechinhu chitoro kana asina kubuda richaparara. Saka, ndagumburwa vamire kuti tiwane rotational nokukurumidza, pasina kuwedzera Horukon yakatarwa, pane kuvhura chipikiri kupfuura dzose.